Muuri News Network » Akhri: Qodoboda Laga Badalay Hishiiskii Doorashada Somalia 2016 & G/Banaadir oo..
Akhri: Qodoboda Laga Badalay Hishiiskii Doorashada Somalia 2016 & G/Banaadir oo..
Guddigii Baarlamaanka Somaliya u xil saaray Turxaan bixinta Heshiiskii Dowladda Somaliya iyo Maamul Goboledyada ay ka gaareen arimaha Doorashooyinka dalka iyo Aqalka sare ayaa isbedel ku sameeyay qaar ka mid ah Qodobadii loo soo gudbiyay.
Xildhibaan Cabdullaahi oo ka tiran Baarlamaanka Federaalka Somaliya qeybna ka ah guddiga 26 ah ee Baarlamaanku u xushay turxaan bixinta heshiiskii madasha ayaa sheegay iney isbedel ku sameeyeen qodobo muhiim ah oo ku jiro awood qeybsiga Aqalka sare ee Baarlamaanka Federaalka.
“Guddigaas baarlamaanka waxaa loo saaray wixii ka soo baxay madashii madaxda qaranka iyo kuwa gobollada oo golaha wasiiradu noosoo gudbiyay 30 bishii April , waxaana lagu ballansanaa iyagu waxay soo saaraan in baarlamaanku sharciyeeyo, micnaha sharciyayntu waxa weeye haddii sharciga uu waafaqsan yahay in la sharciyeeyo hadayna waa waqsaneyna in la fiiriyo danaha qaranka wixii la socon kara”.Ayuu yiri Xildhibaanka.
Xildhibaan C/laahi Jaamac ayaa intaasi hadalkiisa ku daray in Gobolka Banaadir lagu soo daray qaybsiga Aqalka sare, xilli horay uusan Gobolka Banaadir ugu jirin.
ISHA WARARKA– OO DHAN